Netgear WN3000RP Wi-Fi network extender nwere mma ego | Akụkọ akụrụngwa
Netgear WN3000RP Wi-Fi network extender nwere mma ego
Anyị ji n'aka na ọtụtụ ndị ọrụ nwere router tinye n'ime ụlọ nke ụlọ anaghị eru Wi-Fi nke ọma na ụlọ niile nke otu. Eziokwu bụ na enwere echiche ole na ole banyere otu esi eme ka netwọk Wi-Fi n'ụlọ ruo n'akụkụ ya niile nke ọma, mana n'ọtụtụ oge nsonaazụ ndị a sitere na ndụmọdụ ma ọ bụ aghụghọ ndị a adịghị mma dịka anyị chere. Ọ bụ ya mere ọtụtụ oge ka anyị ji azụta ngwaọrụ iji bulie mgbaama njikọ n'ụlọ anyị ma ọ bụ ọrụ anyị ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ịkọwa maka nke a Nbudata 24% na Netgear WN3000RP Wi-Fi Network Extender.
Site na mgbakwunye a anyị nwere ike iji ekwentị mkpanaka anyị kwagide ma jikọta ha site na ịbawanye ogologo anyị nwere na netwọkụ Wi-Fi anyị Mgbatị a bụ nkwụnye ma ọ bụghị otu n’ime nnukwu ihe anyị hụrụ n’ahịa, ọ dịkwa mfe ịhazi na ịwụnye. N'aka nke ozo o na enye anyi ohere mepụta njikọta WiFi maka ngwaọrụ 1 site na eriri, maka ndị niile nwere Smart TV, njikwa egwuregwu ma ọ bụ ngwa ọ bụla chọrọ njikọ Wi-Fi n'ime ụlọ.
O doro anya na Netgear dị na Amazon na ọnụahịa ya abụghị na ọ dị oke elu, ma ọ bụrụ na anyị nwere ụdị onyinye a maka obere oge ma anyị na-achọ ihe ga-enyere anyị aka n'okwu nke Wi-Fi n'ụlọ, ọ nwere ike ịmasị. Oge a ka anyị nwere ike ịzụta ihe a Netgear WN3000RP-200PES - Wi-Fi network ndọtị tupu onyinye ebido maka 18,81 euro na mbufe ọ bụrụ na anyị nwere Amazon Premium.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Netgear WN3000RP Wi-Fi network extender nwere mma ego
Xiaomi na-ebuputa nkpuchi mmetọ a na-adịghị ọcha na China
iOS 10.2 ga-eweta egwu bọtịnụ ọrụ